Home Somali News Masar oo canbaareyn ka soo gaadhay xukunka dilka ah ee Mursi
Xukuumadda Masar ayaa wajahaysa canbaareyntii ugu adkeyd ee ka soo gaarta dalal ka mid ah caalamka, kadib markii Maxkamadda sare xaqiijisey dilka lagu xukumey Madaxweynihii dadka Masar soo doorteen ee la inqilaabey Maxamed Mursi.
Maraykanka ayaa ku tilmaamey mid ay si qoto dheer uga wel-welsan tahay isla markaana ay ka danbeyso siyaasad.
Madaxwweynaha Turkiga Erdogan ayaa si adag uga hadley waxaana uu ku tilmaamey dhankiisa Xasuuq loo geystey sharciga iyo xuquuqda asaasiga ah.
Erdogan ayaa beesha caalamka ugu baaqey in lagu cadaadiyo Xukuumadda Masar ay ka noqoto xukunka dilka ah, isaga oo ugu yeeray Xukuumadda Masar midii inqilaabka.
Hoggaamiyaasha ka gilgishey arxandarada ka socota Masar waxaa kamid ah Xogahayaha Guud ee Qaramada Midoobey, waxaana uu sheegey in Qaramada Midoobey dhamaanba ka soo horjeedo xukunada caynkaas oo kale ah.
Madaxweynihii xukunka Milterigu ka tuureen Maxamed Mursi, sanadkii 2013, ayaa lagu soo oogey denbiyo kor u dhaafaya 16, mar waxaa lagu xukumey 20 sano, kadib waxaa lagu xukumey dil, waxaa maalintii shalay maxkamaddi aydkeysey dilka lagu xukumey isla amrkaana lagu heley Jaajuusnimo. Dhamaan hoggaamiyaashii Xisbiga Ikhaanul Muslimiin ayaa tacdiibkan wada maraya waxaana lagu wada xukumey dil iyo xabsi daa’in.